Wagamuchira masamanisi uye unofanira kukurumidza kumira pamberi pemutongi achatonga nyaya yako kana ungangoda kutanga maitiro iwe pachako. Kuhaya gweta kuti akubatsire rini mumakakatanwa ako epamutemo sarudzo uye kupi kuripira gweta rinosungirwa? Mhinduro […]
Kukuvadza kwakatambudzwa pamaoko emumwe munhu, akasungwa nemapurisa kana kuda kumira kodzero dzako wega: dzakasiyana nyaya umo rubatsiro rwegweta hachisi chinhu choumbozha chisina basa uye mumatare ehurumende kunyange chisungo. Asi chii chaizvo chinoita gweta […]
Shanduko muripo wechibvumirano chebasa: chinoshanda sei?
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, mushandi ane kontrakiti yebasa inoguma ane kodzero yekuripwa zviri pamutemo. Izvi zvinodaidzwawo kunzi shanduko yekubhadhara, inoitirwa kufambisa shanduko kune rimwe basa kana rekugona kudzidziswa. Asi ndeapi mirawo maererano neiyi shanduko yekubhadhara: […]